Nepali – Stories of Sandeept
On September 23, 2021 September 23, 2021 By sandeept252In नेपाली, Blogging, essay, Literature, Nepal, NepaliLeaveacomment
एकाबिहानै एउटा समाचारमा आँखा पर्‍यो । मनमा चस्स बिझायो । स्वर सम्राट नारायण गोपालको घर सङ्कटमा रहेछ । समाचारमा लेखिएको रहेछ–देवकोटाको घर पुनःनिर्माण हुन लागे पनि स्वर सम्राट नारायण गोपालको घर वेवास्तामा परेको छ । देवकोटाको घर पनि संरक्षण गरिएको चैं हैन । पूरै भत्काएर गरिएको पुनःनिर्माण हो । नयाँ बनाइएको घरमा पुरानो जत्तिको महत्व नहोला । वास्तवमा, हामीले सम्मान गर्दै आएका साहित्यकार र कलाकारका अमूल्य सम्पत्तिको रक्षा हामीले गर्नै सकेका छैनौँ ।
हामी साहित्य र कलालाई सम्मान गर्नै जान्दैनौँ । प्राचीन र मध्यकालीन कलाकार (मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकलाविद्, साहित्यकार) हरू को सूची हामीसँग छैन । एकजना अरनिको प्रसिद्ध छन् मूर्तिकला र वास्तुकलामा, त्यो पनि चीन गएर सम्मानित भएकाले । सानै उमेरमा चीन जाने टोलीको नेतृत्व गर्ने अरनिकोले नेपालमा सिर्जना गरेका कलाहरू केके हुन् ? अरनिकोको वास्तविक नाम र ठेगानाका बारेमा पनि अझै अन्जान छु । अध्ययन भएको होला तर कुनै पाठ्यक्रममा पढ्ने मौका पाएको छैन । विदेशमा ख्याति नपाएसम्म आजपनि राज्यले चिन्दैन । परम्परा किन छोड्नु, हैन ?
मल्लकालका केही साहित्य र साहित्यकारका नाम सामान्य ज्ञानका किताबमा भेटिन्छ । त्यसबेलाका राजाहरू नै साहित्यकार ! पढ्ने लेख्ने राजाहरू मात्रै भएर हो कि ? जसले लेखेपनि ती महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू र तिनमा के छ्न् भन्ने कुरा विद्यालयदेखि नै पढाइनु पर्ने हो । तर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेहरू आफ्ना कमसल लेखहरू पाठ्यक्रममा राख्न तत्पर छन् ।
आधुनिक नेपालमा (पहिले पर्वते या खसकुरा भनिने) नेपालीलाई केन्द्रविन्दुमा राखियो । सुवानन्द दासले लेखेको “पृथ्वीनारायण” काव्य नेपालीको पहिलो साहित्य भनेर घोकेको छु तर त्यसमा ठ्याक्कै के छ थाहा छैन । मोतीराम भट्टले नभेटेका भए भानुभक्त आचार्यलाई कतै गुमनाम हुने थिए । महत्त्व दिइएको भाषाका साहित्य पनि संरक्षित छैनन् । नेपाल भाषा, मैथिली, अवधी, तामाङ, किराँती लगायतका भाषा र जनजातिका साहित्य संरक्षण हुने कुरै भएन ।
सरकार त उदासीन भयो भयो, हाम्रा केही साहित्यकारहरू क्रान्तिकारी बन्ने नाममा इतिहासको संरक्षण नगरे पनि हुन्छ भन्ने विचार राख्छ्न् । देवकोटाको घर भत्काइएको विषयमा एकजना “लेखक”ले त्यो घर जोगाइयोस् या भत्काइयोस् मतलब भएन भन्ने आशयको ट्विट गरेपछि एउटा लेख नै लेखेको थिएँ । नारायण गोपालको घरको संरक्षण गर्ने विषयमा पनि उनको विचार जान्न मन लागेको छ ।
नेपाली साहित्यमा देखिएका केही निराशाजनक दृश्यहरू
On August 13, 2021 August 13, 2021 By sandeept252In नेपाली, Blogging, Literature, Nepal, Nepali, Writing1 Comment
यसै साता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्कायो । तर्क थियो, “घर जीर्ण थियो । सबलीकरण गर्न भन्दा भत्काएर नयाँ बनाउन सस्तो पर्ने भयो । नयाँ भवन सङ्ग्रहालय बन्छ । के नराम्रो हुन्छ र ?”
वाहियात तर्क गर्न, कानूनका छिद्र समात्न र दलका पछि लागेर विद्वान हुँ भन्दै हाँक दिन नेपालका प्राज्ञिक भनाउँदाहरूको विशेषता नै हो । उनीहरूमा न इतिहासको चेत छ न त भविष्यको सही योजना नै । ध्यान छ त केबल आत्मरति, अलिकति धन र नचाहिने कुरा गर्न ।
आम सर्वसाधारणलाई महाकवि देवकोटाको घर भत्काइँदैछ भनेर सचेत नगराउने “अभियन्ता” र मिडिया अर्को ठूलो समस्याका रूपमा अघि बढेका छन् । नेपालीमै लेख्ने एकजना “साहित्यकार”को ट्वीटले नेताहरूले रोपेको जातीय/भाषिक द्वेषयुक्त राजनीतिको प्रभाव प्रष्ट देखाएको छ । वर्तमानमा सुधार चाहने, अरू भाषाको उत्थान चाहने उनलाई नेपाली भाषासँग चैं समस्या किन छ ? नेपाली भाषालाई मात्रै महत्त्व दिने नीति कुनै बेला राज्यले लिएको थियो तर अब अरू भाषा संस्कृतिको संरक्षणको कुरा गर्दा नेपालीलाई बाहिर राख्नुपर्ने हो ? कुनै यो विषयमा नाम चलेका “फुल टाइम व्यावसायिक” लेखकहरूको मौनता अर्को दु:खद पाटो हो । इतिहासको सम्मान नगर्ने उनीहरू वर्तमानमा सम्मान पुगेन भन्न कसरी सक्छन् ? भविष्यमा तिनका नाम मेटिँदैन भन्ने के छ ?
अघिल्लो साता मदन पुरस्कारको छनौटमा परेका उत्कृष्ट पुस्तकहरू मध्ये एक पुस्तक यस्तो पनि थियो जसले वर्ग विभेदलाई प्रश्रय दिएको थियो । एक चोटि मात्रै छापिने र प्रिअर्डर गरेकाले मात्रै पाउने भनिएको उक्त कथा-सङ्ग्रह बजारमा सहजै पाइन थालेको सुनेको छु । प्रकाशक र पाठकसँग सिधै सम्पर्क बनाएको, वितरकलाई बीचमा आउन नदिएको भन्ने प्रकाशक अझै पनि नयाँ छापिँदैन भनिरहेका छन् । तर “आउट अफ स्टक” भनिएका ठाउँमा पनि फेरि बिक्री भइरहेको छ । अर्थात् प्रकाशकले प्रिअर्डरबाट मात्रै बिक्री गरेको भने पनि अलिकति सचेत पाठकले त्यो पत्याइहाल्ने स्थिति छैन ।
अनि लेखक भक्ति पनि मज्जैले देख्न पाइयो यो हप्ता । आफूलाई मन पर्ने लेखकको किताबको कमजोरी अरू पाठकले औँल्याउँदा लेखकमाथिको आक्रमण गरेको भन्ने विद्वान् पनि देखियो । पाठकले प्रतिक्रिया दिँदैमा कुनै लेखकका फ्यान त्यसरी उत्रिनु नै अनौठो लाग्यो । यस्तो भक्तिले त लेखकले सधैं पोजिटिभ रिभ्यु मात्र पाउँछ । जे लेखे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता उसमा हाबी हुन थाल्छ । लेखनको गुणस्तर स्वाभाविक रूपमा घट्छ । यो साहित्यको लागि कदापि राम्रो हुन सक्दैन ।
पाठक प्रतिक्रियालाई व्यक्तिगत आक्रमण ठान्ने, प्रकाशकले दिनदहाडै लुट्ने अनि प्राज्ञहरूले प्राज्ञिक धर्म पूरा नगर्ने प्रवृति नेपाली साहित्यलाई अधोगतितर्फ लान उद्दत रहेका छ्न् । सचेत पाठक, पाठकलाई सम्मान गर्ने लेखक/प्रकाशक र सही एजेन्डा बोकेका प्राज्ञ नभएसम्म नेपाली साहित्यलाई सही बाटो देखाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
पुस्तक समीक्षा: कथाकी पात्र
On July 20, 2021 July 20, 2021 By sandeept252In नेपाली, Book Review, NepaliLeaveacomment
सोनुले आफ्नो कोठामा रहेको किताबहरूको सेल्फ देखाएकी थिइन् । सुबिन भट्टराईका “मनसुन” बाहेकका सबै किताब माथि नै थिए । “मनसुन” खासै मन परेको थिएन । सुबिन भट्टराईको किताब पढिहाल्न खासै मन थिएन तर पहिलोपल्ट ससुराली गएको, काम पनि केही थिएन । अल्छी लागिरहेको थियो । मोबाइल चलाएर बस्नुभन्दा किताब पढ्नै ठीक लाग्यो । राम्रो नराम्रो जेसुकै होस्, पढ्छु भनेर “कथाकी पात्र” उठाएँ । सङ्ग्रहका १९ मध्ये पहिले शीर्ष कथा छाने । मन छोयो । अघिपछि गर्दै सबै कथा पढेँ । प्रत्येक कथाको चर्चा (कथासङ्ग्रहमा रहेको क्रमानुसार) छोटकरीमा गरेको छु ।
औडाहा: कथाको पुरुष “म” पात्रले आफ्नो बिहेकै रात आफ्नी श्रीमतीको पहिले अरू नै सँग प्रेम रहेको थाहा पाउँछ । त्यसपछि उत्पन्न छटपटीको यो कथाले पुरुष र पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई एकदम राम्रोसँग देखाएको छ ।
औडाहा–२: औडाहाकै कथा हो यो । तर “म” पात्र महिला छे । आफ्नो पहिलेको प्रेम सम्बन्धका बारेमा भन्नु हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने द्वन्द्वमा ऊ फसेकी छे ।
यी दुवै कथा राम्रो लाग्यो तर समस्या लिएर गुम्सिनुको साटो समाधानला उपाय खोजेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो ।
मन परेको साथी: 2nd person narrative कथाहरूमा खासै प्रयोग हुँदैन । तर यस्ता कथाहरू मलाई मनपर्छन् । “तिमी” सम्बोधन गर्दै कथावाचकले आफ्नी प्रिय साथीलाई मनका कुराहरू लेखेको छ । यो प्रेम कथा मन छुने चिठीझैँ छ ।
अन्तराल: “म” पात्रले आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्थाको कथा यसमा भन्दछ । ऊ दाजु सुमनबाट सानोमा प्रभावित भएको थियो । त्यसैगरी भान्जा प्रज्ञान “म” पात्रले जे गर्‍यो त्यही पछ्याउँछ । तर वर्षौँपछि भेट हुँदा प्रज्ञानले नराम्रो घटनामात्रै सम्झिरहेको हुन्छ । मामाभान्जाको सम्बन्धमा केन्द्रित सुन्दर कथा हो यो, सङ्ग्रहको उत्कृष्टमध्येको एक ।
अर्काकी स्वास्नी: बद्रीकी श्रीमती अङ्गुरी लक्ष्मणसँग भाग्छे । तर बद्री बिरामी छ भन्ने खबर पाएपछि फर्किन्छे । उसलाई फर्काउने जिम्मा “म” पात्रले पाएको छ । तथापि बद्रीसँग उसको केही दुश्मनी छ । बदलाको यो कहानी रोचक छ । अन्तिममा उसले भनेको कुरा साँचो हो या हैन भन्ने कुराले अझै पनि मलाई पोलिरहेको छ ।
तिमी मलाई किन प्रेम गर्छौ ? : “म” पात्रकी प्रेमिकाले “स्वार्थ नभएको कोही छैन” भन्दै यो प्रश्न सोध्छे । “म” पात्रले जवाफ दिन नसकेपछि उसकी प्रेमिकाले दिएको जवाफ एकदम चित्तबुझ्दो लाग्यो । यो जहिले पनि याद आइरहने कथा हो ।
बिहेको निम्तोमा : “म” पात्रकी छिमेकी साथीको बिहे छ । तर अचानक उसलाई अर्को प्रिय साथीको मलामी जानुपर्छ । बिहेमा ढिलो गरी पुगेको उसको हुलिया र अनुहार हेरेर छिमेकीहरू उसलाई हौवामा “देवदास” बनाइदिन्छन् । यो कथामा सामाजिक मनोविज्ञान निकै राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ ।
“मान्छे, आफू कहाँ हो ?” : फोन सेक्स (डिटेल्ड हैन) समेटिएको कथा हो यो । केटाहरूको मनोविज्ञान देखाइएको छ । तर सङ्ग्रहको सबैभन्दा कमजोर कथा हो यो ।
भ्रम या सत्य ? : “म” पात्रले नेपाल यातायातमा एउटी राम्री केटी देख्छ । केटीले पनि उसलाई बारम्बार हेर्छे । पहिले कतै चिनेको हो कि जस्तो लाग्छ । केटीसँग आँट गरेर सोध्छ । केटीले “महिला सिटमा बस्नुभएको रहेछ, छोड्नुहुन्छ कि भनेर हेरेको । छोड्भएन ।” भनिदिन्छे । यद्यपि महिला सिटमा बसेको कुरा पहिल्यै आइसकेकाले यो क्षणमा जुन पन्च मुखैमा लाग्नुपर्थ्यो, हावामा बत्तिन्छ । अनि कथाले बल्ड्याङ खान्छ । यसर्थ यो पनि एउटा कमजोर कथा हो ।
बर्बादी : “म” पात्र आफूभन्दा बढी उमेरकी पात्रसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छ । यसमा ड्रामा त छ तर एउटा साथीबाहेक अरू गाउँलेलाई थाहै नहुनु चैं त्यति पत्यारिलो लागेन ।
तीन कथा : तीन मिल्ने केटाहरू निमेष, साकार र किशोर (न्यारेटर) सपनासँग पालैपालो प्रेममा पर्छन् । वर्षौँपछी भेट हुँदा अरूसँग बिहे गरेर गएकी सपनाको बारेमा कुरा चल्छ । यी तीन पात्रहरूमा समयसँगै आएको परिवर्तनले राम्रै झट्का दिएको थियो ।
देहरादुन एक्स्प्रेस : “म” पात्र देहरादुनबाट गोरखपुर जाँदा रेलमा एउटी राम्री केटीलाई देख्छ । तर केटी यात्राभरी चुप बस्छे । संकोचले ऊ केटीको सुन्दरताका बारेमा भन्न सक्दैन । पछि अरू यात्रीबाट केटीको जिब्रो उसकी सौतेनी आमाले थुतिदिएको थाहा पाउँछ ।
यो कथाले मलाई ७-८ कक्षातिर गुलमोहरमा पढेको रस्किन बन्डको कथा “The Eyes are not Here/The Eyes Have It” सम्झाइदिएको थियो ।
अपसोस : हिन्दू “म” पात्र मुस्लिम केटीसँग प्रेम गर्न पुग्छ । तर प्रेम असफल रहन्छ । “म” पात्रले पाठकसँग कुराकानी गरेझैँ लाग्छ तर बीचमा यो शैली छुटेको हुँदा एकै शैलीमा लेखिएको हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो ।
घृणा : “म” पात्रको छिमेकमा एउटी बूढी आमै छिन् जसलाई ऊ पटक्कै मन पराउँदैन । तर जब तिनी बित्छिन् उसको मन शून्य हुन्छ ।
कथाकी पात्र : कथाकार “म” पात्र कथा लेख्न सकिरहेको छैन । Writer’s block ले पीडित ऊ आफ्नी श्रीमतीलाई हेर्छ अनि आफ्ना लागि उसले गरेका त्यागहरू सम्झिन्छ । अन्ततः श्रीमतीलाई ऊ आफ्नो कथाकी मुख्य पात्र बनाउँछ । यो कथा राम्रो लागेकैले गर्दा सङ्ग्रहका अरू कथा पढ्न उत्साहित भएको थिएँ ।
बूढो र पिज्जा : एउटा बूढोलाई पिज्जा खान मन लाग्छ तर सबैले उसलाई गिज्याउँछ्न् । जब बल्लतल्ल खान पाउँछ, उसलाई मन पर्दैन । बूढा मानिसको इच्छा र त्यसले निम्त्याउँने द्वन्द्व निकै रोचक लागेको थियो ।
भगाइहरू : “म” पात्र आफ्नो बिहेबाट भाग्छ । उसले यसो ठीक गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न आइरहन्छ ।
मन नपरेको साथी : “म” पात्रलाई केशव मनपर्दैन तर उनीहरू घरिघरि ठोक्किइरहन्छ्न् । बेइमान साथीहरू सम्झाउँछ यो कथाले ।
नदीकिनारको प्रेम : “म” पात्र निरुसँग प्रेम गर्न थाल्छ तर आफ्नो “चेला” गोविन्दसँग उसले प्रेम गर्न थाल्छे । नदीकिनारका दृश्यहरू सुन्दर छन् । तराईको याद दिलाएको थियो ।
“कथाकी पात्र” सुबिन भट्टराईको पहिलो प्रकाशित कृति भए पनि पछिल्ला किताबभन्दा सशक्त देखिन्छन् । एकाध कथाबाहेक उनको प्रस्तुति मीठो छ । कतैकतै जटिल शब्दहरूको अनावश्यक र अपत्यारिलो प्रयोगबाहेक सरल भाषाशैली अपनाएका छन् ।
[नोट: “कथाकी पात्र” पढेपछि “समर लभ” पढ्न मन लागेको थियो । फेरि ससुराली जाँदा पढेँ । तर “समर लभ” मलाई मन परेन । सुरुदेखि नै यसमा समस्या छन् । कथाको प्लट पनि कहीँ पुग्दैन । चाँडै नै यसका बारेमा छुट्टै चर्चा गर्नेछु ।]
On April 6, 2021 By sandeept252In Humanity, Humans and Humanity, Inspirational, Nepali, Public Interest, Science And SocietyLeaveacomment
१. ज्ञान र शिक्षा फरक कुरा हुन् ।
२. गलत शिक्षा हुनुभन्दा नभएकै वेश ।
३. शिक्षाको उद्देश्य सिक्ने या बुझ्ने हुनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म शिक्षा र शिक्षा प्रणाली गलत हुन्छन् ।
४. उत्सुकता र प्रकृतिसँगको निकटताले मानिसलाई ज्ञानी बनाउँछ भलै उसले औपचारिक शिक्षा नपाएको होस् ।
५. दक्षिण एसियामा मातृभाषामा ज्ञान पाउन धेरै नै गाह्रो छ । मातृभाषाबाट हुने सिकाइले बालबालिकालाई उत्सुक बनाउन सिकाउँछ र उनीहरूको आत्मविश्वासमा समेत मद्दत गर्छ । मातृभाषामा राम्रो पकड छ भने अरू भाषा सिक्न पनि सजिलो हुन्छ ।
६. भूगोल र माटो अनुसारको शिक्षा उपयोगी हुन्छ । युरोपेलीको नक्कल गरेर अघि बढ्न सकिन्न ।
७. सरकारमा रहेका/प्रभावशाली व्यक्तिका सन्तानहरू सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा केही परिवर्तन आउँदैन ।
८. प्रकृतिमा प्रकृतिसँग सिकेका कुराहरू वास्तविक ज्ञान हुन् तर त्यसतो मौलिक ज्ञानको साटो हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू युरोप र अमेरिकाका कोर्सहरू कपी-पेस्ट गरिरहेका छौँ । यसले हामीलाई पछि पार्छ ।
९. शिक्षाका तीन माध्यम हुन्छन्: (१) श्रुतियुक्त (सुनेका र पढेका कुरालाई महत्त्व दिने), (२) चेतनायुक्त (सुनेका/पढेका कुरालाई मनन गर्ने र तीमाथि तर्क गर्ने) र (३) भावयुक्त (अनुभव लिँदै सिक्ने) । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अनुभव लिँदै सिक्ने कुराको अभाव छ ।
सोनाम वाङ्चुकको अन्तर्वार्ता
पुस्तक समीक्षा: सेतो गुलाब
On January 21, 2021 January 21, 2021 By sandeept252In नेपाली, Book Review, Literature, Love, NepaliLeaveacomment
अनिश थापाको “सेतो गुलाब” पढ्न थाल्दा उपन्यास ठूलो अपेक्षा थिएन । “सेतो गुलाब”को धेरथोर चर्चा सुनेरै घरमा किनेर ल्याएको थिएँ । किनेको झन्डै एक वर्षपछि बल्ल पढ्ने मौका मिल्यो । किन एक वर्ष लाग्यो मलाई यो किताब उठाएर पढ्न ? “पाठकले पुस्तक हैन, पुस्तकले पाठक रोज्छ” भनेझैं भएको हो कि ? थाहा छैन ।
“सेतो धरती”मा अमर न्यौपाने सेतो रङ्गलाई उजाड र रङ्गहीन जीवनको प्रतीक बनाउँछन् । समाजले श्रीमान् गुमाएका नारीलाई दिने सेतो रङ्ग दु:खको प्रतीक हो । त्यसको विपरित “सेतो गुलाब”मा अनिश थापा सेतो रङ्गलाई सुन्दरता र पवित्र प्रेमको प्रतीक मान्छन् । हुन पनि सात रङ्गको मिश्रणले सेतो रङ्ग बन्दछ । सेतो प्रकाशलाई कतैकतै पवित्रताको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै सेतो गुलाबलाई समर्पणको बिम्बका रूपमा पनि हेरिन्छ ।
“सेतो गुलाब”मा प्रेम, मित्रता र समर्पणका कथा आएका छन् । किशोर अवस्थाका पात्रहरूको सरल शब्दमा लेखिएको कहानी छ । स्कुले दिनहरू रमाइलोसँग आएका छन् । सँगै आएका छन् कलिलो उमेरको प्रेमका समस्या, करिअरको चिन्ता अनि उत्प्रेरणा जगाउने प्रसङ्गहरू ।
अभिजित जसको डायरीबाट मूल कथा आएको छ, सजीव छ । अभिजितलाई निकै राम्रोसँग चित्रण गरेका छन् उपन्यासकारले ।
उसको साथी नीर प्रायः उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छ । यद्यपि उसमा थोरै भए पनि चञ्चलता छ ।
सुयोना अभिजितजस्तै दु:खी पात्र हो, भलै उसको दृष्टिकोणबाट कथा नबुनिएको होस् । तथापि उसले अभिजितलाई गरेको व्यवहार चित्त बुझ्दो भने लागेन । उसको केसले अभिजितलाई पहिलेदेखि नै प्रेरित गरेको भए कथा अझ राम्रो हुने थियो ।
सद्दाम बाहिर हेर्दा हाउडे भए पनि मनको सफा छ । यद्यपि उसको पात्रता अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो लाग्यो ।
उपन्यासको संरचनामा थोरै कमजोरी छ । पहिलो दृश्य जसमा सुयोनाले अभिजितको डायरी पढ्न थाल्छे, त्यसलाई प्रोलग बनाउन सकिन्थ्यो । फरक न्यारेटर र टाइमलाइन भएको भाग छुट्टै राख्दा उपन्यासको कथानक बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ । त्यस्तै अन्तिमका दृश्यहरू इपिलगका रूपमा आएको भए हुन्थ्यो । अभिजितको डायरीको पहिलो कथा (प्लेन दुर्घटना हुन बाट बचेको) पछि फेरि दोहोरिन्छ । यो भागलाई पछि नै राखेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो ।
कतैकतै नामका हिज्जेमा द्विविधा देखिन्छ । धेरैजसो अभिजित लेखिएको भए पनि कतैकतै अभिजीत भएको छ । केही प्रसङ्ग फरक शब्दमा भए पनि दोहोरिएका छन् ।
उपन्यास सरल भाषामा लेखिएको छ । slang हरूको प्रयोग राम्रो छ । संरचनामा कमजोरी जस्तो लागे पनि कथा सलल बगेको छ । पात्रहरू प्रायः राम्रोसँग ह्याण्डल गरिएको छ । विद्यार्थी जीवनका विभिन्न आयाम अटाएका छन् । उपन्यासले फिलोसोफी र साइन्स फिक्सन पनि समेटेको छ ।
“सेतो गुलाब” अलिअलि फिल्मी लागे पनि पात्रहरूको मिलन, बिछोड र सम्झना समेटिएको मीठो उपन्यास हो ।
लेखक गनेस पौडेलको फेसबुक पोस्टले नेपाली साहित्य प्रकाशनका बारेमा उजागर गरेका प्रश्नहरू
On November 17, 2020 March 3, 2022 By sandeept252In नेपाली, Blogging, Literature, Nepal, NepaliLeaveacomment
हिजो साँझ कुमार नगरकोटी को नयाँ किताब आउनेबारे थाहा पाएँ । ७७७ पेजको, हार्डकभर ज्याकेट, झोला, बुकमार्क सहित मूल्य रू. २०२१ अरे । अनौठो चैं किताब एकपटक मात्रै छापिने रे । त्यसैले प्रि-अर्डर गर्नुपर्ने । जति कपि माग हुन्छ, त्यति नै छापिने रे । मार्केटिङ स्किम राम्रै होला किनकी चर्चा त निकै नै छ (सकारात्मक पनि नकारात्मक पनि) । फेसबुकमा यस सम्बन्धी सूचना देख्नेबित्तिकै “ओहो ! मूल्य धेरै भएन र? किन्नै नसकिने पो रैछ !” हीनभाव मनमा आयो । धेरैले यस्तै कुरा लेखेको पनि भेटेँ । केहीले आफैँ किन्ने, कसैले ग्रुपमा किनौँ भनेको पनि भेटेँ ।
बिहानसम्ममा मूल्यको विषयमा थुप्रै वादविवाद भइसकेछन् । अलि कम मूल्य भएको भए किन्थें भन्नेहरू देखिए । स्किम चित्त नबुझेर जोक बन्नु/गुनासो हुनु स्वाभाविक नै हो । यसैबीच यस्ता गुनासाका बारेमा अर्का लेखक गनेस पौडेलको को एउटा पोस्ट देखापर्यो फेसबुकमा । उनको ७ बुँदे पोस्टले नेपाली साहित्यमा रहेका केही समस्या उजागर गरेको छ ।
यो फोटोको ठाउँमा लिंक नै इम्बेड गरेको थिएँ । लेख्दा लेख्दै ढिलो भो, अकाउन्ट डिएकटिभेट गर्नुभएछ* ! धन्न स्क्रीनसट थियो !!
१. बुँदा नम्बर १ मा पौडेल लेख्छन्
“एउटा कथित पूर्णकालीन लेखकले औसत ३ वर्षमा यौटा किताब लेख्छ ।”
कुनै पनि सिर्जनामा सर्जकको कति मिहिनेत र खर्च परेको हुन्छ भन्ने लेखाजोखा गर्न असम्भव नै हुन्छ । पूर्णकालिन लेखकका लागि त लेख्नु सौख मात्र होइन, माम खाने दाम पाउने काम हो । परिश्रमको उचित पारिश्रमिक पाउनु श्रमिक अधिकार पनि हो । तर लेखकहरूले उचित लेखकस्व पाएका छैनन् भनेर उनी स्वीकार्छन् :
“सम्झौता पत्रमा बढीमा २० प्रतिशत रोयल्टी दिने प्रचलन छ । तर त्यो प्रतिशत देखाउने कागज मात्रै हो । बेस्ट सेलरै भनिएका किताबवापत पनि नेपाली लेखकले औसतमा २ लाख बुझ्छन् ।”
केही दिनअघि साहित्य सम्बन्धि छलफल हुने एउटा फेसबुक ग्रुपमा लेखकले कति रोयल्टी पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यतिबेला सालाखाला यति पाउँछन् भन्ने पनि कोही भेटिएनन् । जे होस्, आज जवाफ भेटियो ।
तर पौडेलले सातौं बुदामा रोयल्टी सम्बन्धि कुरा आफ्नो अनुभव हैन भनेका छन् । प्रकाशकहरूले खुल्लमखुल्ला यी कुरा नभन्ने भएकाले उनी आफैंले नभोगी वा आफ्नो नजिकका अरू लेखकले नभनी थाहा पाउन असम्भव छ ।
क) आफ्ना किताब कति बिक्री भए र कति आम्दानी गर्दैछ, त्यसबाट आफूले कति पाउँदैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनु लेखकको अधिकार हैन र ? एकएक हिसाब हुनुपर्ने हैन ? ‘विश्वास’को आधारमा बजार कसरी चल्छ ?
ख) अनेकौं कुराहरूको गर्न सक्ने लेखकहरूले सम्झौता अनुसार रोयल्टी नदिने फटाहा प्रकाशकको भण्डाफोर गर्नुपर्ने हैन ? कानूनी उपचारमा ल्याउनुपर्ने होइन ?
ग) पूर्णकालिन लेखकले पनि उचित लेखस्व पाउँदैनन् भने तिनै कथित पूर्णकालिन लेखक र प्रकाशक रोयल्टीबाट बाँच्न सकिन्छ किन भनिरहन्छन् ?
घ) नयाँ साहित्यकारलाई भ्रममा फस्न नदिन स्थापित लेखक र प्रकाशकले सहयोग गरेका छन् त ?
२. दोस्रो बुँदामा रिसाउँदै भन्छन् :
दुई लाखले के यौटा पूर्णकालीन लेखकको ३ बर्ष कट्छ ? कथित सेलिब्रिटी बनाइएको लेखकले दालभात खानु पर्दैन ? रोग लागेपछि राज्य वा चन्दादाता गुहार्नु के लेखकको नियति हो ?
लेखकलाई काम बापत माम खान पुग्ने दाम दिने (र बाँच्न सजिलो बनाउने) जिम्मा प्रकाशकको हो, पाठकको होइन । किनकी उनकै अनुसार पाठकले एउटा किताबमा २००० नै खर्चिए पनि “कथित पूर्णकालिन लेखक”ले बढीमा पाउने ४०० रूपैयाँ हो । ५००० प्रति विक्दा लेखकको हातमा २० लाख हात पर्ने रहेछ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छन्:
क) ५००० प्रति बिक्छन् ?
ख) ५००० मात्र होइन, ५०००० प्रती बिकून्, हार्दिक शुभकामना तर एकाध साहित्यकारको ब्राण्ड भ्यालु बढ्दैमा साहित्यको ब्राण्ड भ्यालु बढेको हुन्छ र ? अरू साहित्यकारले पनि सजिलोसँग बाँच्न पाउँछन् ?
ग) प्रकाशकले साहित्यको कन्टेन्ट भन्दा एकाध जनराका साहित्यकारलाई मात्रै पो प्रश्रय दिन्छन् कि ?
घ) नयाँ साहित्यकारलाई प्रकाशकले यसैगरी चर्चामा ल्याउन सक्छन् ? कतै स्थापितलाई मात्रै त महत्त्व दिँदैनन् ?
३. तेस्रो बुँदामा पौडेल लेख्छन् :
मलाई लाग्छ, कुमार नगरकोटीको यो किताब एउटा सिर्जनात्मक मात्रै होइन आर्थिक प्रयोग पनि हो । यस्तो प्रयोगका लागि एउटा उत्कृष्ट किताब चाहिन्छ जुन कल्प–ग्रन्थ छ ।
नगरकोटीको फ्यान फलोइङ देखेर चकित भएको छु । रचना राम्रो पनि होला । तर,
क) लेखक, प्रकाशक र लेखकका मित्रगणले राम्रो छ भन्दैमा उत्कृष्ट हुने ग्यारेन्टी हुन्छ र ?
ख) फ्यानहरूले मात्रै पढ्ने भए पछि उचित समालोचना कसरी होला ? उचित समालोचना बिना लेखकको सिर्जनात्मक ग्रोथ कसरी होला ?
ग) लेखक र प्रकाशकले “खतरा प्रयोग गरेको छु” भन्नु भन्दा पाठकले प्रयोग बुझ्नु र त्यसलाई मन पराउनु राम्रो होला नि, हैन र ?
४. चौथो बुँदामा भन्छन्, “सबै किताब सबैका लागि हुँदैनन्” र पाँचौँ बुँदामा थप्छन्, “यो एउटा दर्शन हो ” ।
सबै किताब सबैका लागि हुँदैन । मान्छु । जस्तो कि यो किताब मेरो लागि होइन । न बजेटका हिसाबले न कन्टेन्टका हिसाबले । यो किताब धेरै साहित्यझैँ मेरो आधारभूत आवश्यकता पनि होइन । तर यो दर्शन हो भने सर्वसुलभ हुनुपर्छ । जहाँ, जहिले, जसले पनि दर्शन बुझ्न सक्छ । दर्शनले कुनै विभेद गर्न सक्दैन । विभेद गर्ने दर्शन त दर्शन नै रहँदैन ।
त्यसै गरी पढ्न चाहनेले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै पुस्तकको महत्त्व बढेको हो । सबै किताब सबैको लागि नभए पनि सबैको बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
किन्नेले किनिहाल्छ भन्ने सोच पनि एकदम खतरनाक हो । यसले वर्गीय विभेदलाई बढावा दिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ । गुणस्तरमा समेत असर पार्न सक्छ । फेरि बजारले निर्धारण गरेको मूल्य मात्रै किताबको मूल्य होइन । जीवनलाई निर्देश गर्ने किताबको बजार मूल्य नभए पनि त्यो अमूल्य हुन्छ । जति धेरै पाठकको दिलदिमागमा बस्न सक्यो, किताबको मूल्य बढ्दै जान्छ, हैन र ?
५. छैठौं बुँदामा ग्रुपमा किन्दा हुन्छ भनेपछि त असमञ्जसमा पो परेँ । ग्रुप बनाउन सजिलो नहोला । बन्यो भने पनि साना गोजी भएका पाठकको गोजी जोड्दा पाठकको समस्या त हल होला तर के लेखकको गोजी भरिएला ? १० जनाले २००० रूपैयाँ दरको १ प्रति किताब किन्नु र १० जनाले ३०० रूपैयाँ दरको १० प्रति किताब किन्नुमा कुनमा बढी आर्थिक फाइदा लेखकलाई होला ? लेखकलाई लेखेर खान पुग्दैन भनेर सुरु भएको बहस आखिरमा त्यहीँ पो पुग्यो त ।
“कन्टेन्ट इज् द किङ” साहित्य र चलचित्रमा अक्सर भनिन्छ । कन्टेन्ट राम्रो भएन भने ब्राण्ड र कमाइ मात्रैले केही हुँदैन । उदाहरण हो केही महिनाअघि रिलिज भएको डिज्नीको चलचित्र “मुलान” । साहित्यमा पनि स्थापित लेखक (ब्राण्ड) को पछाडी दौडनु एउटा उपभोक्ता (पाठक) का लागि रिस्क हुनसक्छ । किताब पनि एउटा उपभोग्य वस्तु भएकाले अरू सामान किन्दाझैं किन किन्ने, ‘मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन ? मूल्य बढी पो भयो कि ?’ भन्ने प्रश्नहरू गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई हुन्छ । नगरकोटीको ब्राण्ड पछि फाल हान्नेले ब्राण्ड भ्यालु बुझेका होलान् तर यो अन्धाधुन्ध उपभोगको भीडबाट अलग रहन चाहेँ ।
नगरकोटीलाई यो स्किमले कति फाइदा गर्ला ? नेपाली साहित्यमा आउँदा दिनमा कस्ता “प्रयोग” होलान् ? नयाँ साहित्यकारलाई कसरी फाइदा होला ? बढी मूल्य राख्दैमा लेखक मोटाउँछन् भन्ने तर्क कति ठीक हो ? आदि इत्यादि प्रश्नको जवाफ छिटै पाइने नै छ !
*पुच्छ्रे टिपोट: सुरुमा “ब्लक खाएँ” लेखेकामा फेसबुकमा पछि त्यसो होइन भन्ने कमेन्ट आएपछि सच्याइएको । “कुतर्क गर्नेलाई ब्लक गर्छु” भन्नुभएको थियो । “बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु” भनेझैं भएछ । क्षमाप्रार्थी छु ।
सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर पुग्छ ?
On August 18, 2020 August 18, 2020 By sandeept252In नेपाली, Blogging, essay, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Public Interest2 Comments
(गणतान्त्रिक नेपालमा “सरकार” शब्द भद्दा लाग्छ । “सरकार” शब्द प्रयोग गरिरहँदा म आफूलाई भुईंमा बसेर गद्दीमा गमक्क परेर बसेको शासकको निगाह बक्स गरिरहेको कल्पना गर्छु । तर शासन संयन्त्रको लागि यो जत्तिको अर्को संबोधन छैन किनकी “सरकार” को चाकर नगरे सम्म जनताले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यही शब्दले सम्बोधन गर्न बाध्य छु ।)
२०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा पारित भयो । भारतसँग विवाद रहेको कालपानी क्षेत्र लाई समेटेर नक्सा बनाए पनि त्यहाँको वस्तु स्थिति बारे बुझ्न सरकार तयार भएको देखिँदैन । साझा कथाले यूट्युबमा राखेको भिडियो हेरे पछि सरकारप्रति रिस उठेको छ ।
साझा कथाको साहसी टिमले बनाएको वृत्तचित्रको पहिलो भाग
कालापानी भू-भाग हाम्रो हो भन्ने कुरा भूगोलको आधारमा त गलत छैन तर त्यहाँ राज्यको अनुभूति खै त ? ज्यान हत्केलामा राखेर छाङरू सम्म पुगेको साझा कथाको रिपोर्टिङको पहिलो भागमा नै त्यहाँ मात्र होइन, विवाद नभएको ठाउँमा पनि राज्यको उपस्थिति शून्य देखिन्छ । पारि भारतमा दुई लेनका सडक छन्, बस्तीहरू मा आधारभूत सुविधा छन् , लगातार सुरक्षा गस्ती छ । बाटो निर्माण चलिरहेकै छ । यता पट्टि नेपालमा डरलाग्दा ठाडा भीर छन्, पहिरो छ । सुरक्षाकर्मीको नाम निशान छैन । ठूला मान्छे आएको बेला मात्रै ड्युटी चल्छ । सीमाना जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत कोही सैनिक प्रहरी र प्रशासन नहुनुले हामीलाई देशका साँध सीमाको कुनै मतलब छैन भन्ने देखाउँदैन र ?
सीमालाई गम्भीरताका साथ नलिएको त आफ्नै आँखाले देखेकै हुँ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा । मितेरी पुल अगाडि साइन बोर्ड छ जसमा लेखिएको छ ‘यहाँ फोटो / भिडियो खिच्न मनाही छ ।’ सँगै एउटा सानो पोस्ट छ जहाँ हरबखत एक जना सुरक्षाकर्मी हुनैपर्छ तर छैनन् । पारि चिनियाँहरू पहरा दिएर बसिरहेका छन छन् । फोटो खिच्न मनाही भने पनि ‘उताको नखिच्नु यतापट्टीको खिच्दा हुन्छ’ भनेर यता बाट अनुमति पाइयो । सुरक्षाकर्मीहरू चैं गफ चुट्नमा व्यस्त थिए । पारिबाट कोही आयो भने पनि यता थाहा पाउने स्थिति छैन तर पारिका सुरक्षाकर्मी हाम्रा एकएक गतिविधि ध्यान दिएर हेर्छन् ।
त्यो भन्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था साझा कथाले बनाएको वृत्तचित्रमा देखिन्छ । सरकार, हामीले यहाँ नक्सा पास गरायौँ, खुशीयाली मनायौँ । तर आफ्नो स्वामित्वको, त्यसमाथि विवादित क्षेत्रमा सेना किन नपठाएको ? यत्तिका वर्ष उता बाटो बनिरहँदा किन चुप बसेको ? ‘मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्दा पनि रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न अझै पनि ढिलासुस्ती किन ? सरकार, अझै कति लाचार बन्ने ? नेपालको जमिनमा बसेका तर नेपालको सरकारले काहिल्यै नहेरेका त्यहाँका नागरिकले अपराध बोध किन गर्नु पर्ने ? बस्नु अपराध आफ्नो जमिनमा विवाद निम्त्याइ सकेपछि समाधानको पहल किन गर्न नसकेको ?
संघीय संसद्को नयाँ ‘लोगो’ जसले नेपालीको भावनामाथि उपहास गरेको छ
देशको कुनाकुनामा राज्यको उपस्थिति भए मात्रै देश बलियो र समृद्ध हुन्छ । नक्सा पास त संघीय संसदबाट भयो तर त्यही संघीय संसद्को लोगोले नयाँ नक्सा र जनभावना प्रति कटाक्ष गरेजस्तो लाग्छ । कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान नभएसम्म नक्सामा मात्रै राखेर गमक्क पर्न छुट छैन सरकार ! नक्सा सुरुवात मात्रे हो । यो पर्याप्त छैन । छिमेकीलाई बलमिच्याइँ गर्न नदिन हाम्रा संयन्त्र अझै लागेका छैनन् । केटाकेटी खेले जस्तो गरेर सीमा विवाद समाप्त हुँदैन । सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर हुन्छ ? झन्नै ६० वर्ष भो राज्यको उपस्थिति त्यहाँ नभएको । अझै कति ढिलाइ गर्ने हो ?
भगवान् रामको जन्मभूमि नेपालमा नै छ ?
On July 15, 2020 July 15, 2020 By sandeept252In नेपाली, Blogging, History, Humans and Humanity, Nepali, Reasoning3 Comments
भानुभक्तको जन्मदिन । उनका रामायणका हरफहरू प्रशस्तै देखिरहेको थिएँ । साँझ ट्वीटरमा राम नाम जप्नेहरूको कमी थिएन । त्यसैको निरन्तरता हो कि जस्तो लाग्यो । एकछिन पछि हेर्छु त राम जन्मभूमि अयोध्या भारतमा होइन नेपालको वीरगन्ज नजिकै ठोरीमा पो छ भनिरहेका छन् । के भएछ भनेर बुझ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसोको कार्यक्रममा त्यसो भन्नुभएको रहेछ । के अयोध्या नेपालमै थियो ? यो प्रश्न उठाएको एउटा लेख (‘भगवान् राम नेपालमै जन्मेका आठ प्रमाण’, २०७५ कात्तिक ३०, सौर्य अनलाइन) घुम्दैफिर्दै आइपुग्यो । लोकमणि पौडेलले लेख्नु भएको त्यो लेखमा आठवटा ‘प्रमाण’ प्रस्तुत गरिएको रहेछ । यी ‘प्रमाण’हरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छु ।
१. ५ सय किलोमिटर टाढाको अयोध्याबाट रथमा चढेर जनकपुर आइपुग्न सम्भव थिएन ।
यो तर्क साह्रै फितलो छ । विश्वामित्रले गर्न लागेको यज्ञ मारीच र ताटका राक्षसराक्षसीले पटकपटक भङ्ग गरेकाले यज्ञको रक्षा गर्न र राक्षसराक्षसीको वध गर्न रामलक्षमणलाई अयोध्याबाट कौशिकी किनारको आश्रममा लागेका थिए । यो कथाले वाल्मीकि रामायणको केही भूगोल बुझ्न मद्दत गर्छ । बाल काण्डको सर्ग २३ देखि ३० सम्म सरयू नदी र गङ्गाको संगमस्थलमा रहेको अङ्ग प्रदेश पुगेको, गङ्गा तरेर ताटकाको वनमा गएर उसको वध गरेको, वन पार गरेर विश्वामित्रको सिद्धाश्रममा मारीच र सुबाहु राक्षसबाट यज्ञ रक्षा गरेपछि बल्ल मिथिलातिर लागेको प्रसङ्ग छ । त्यस्तै सर्ग ३१-६५ मा शोणा नदीको किनारमा बसेर विशाला नगर हुँदै मिथिला पुगेको उल्लेख छ । उता रामजानकी विवाह निश्चित भएपछि दशरथलाई सन्देश पुर्‍याउने दूतहरू तीव्र गतिमा घोडा चढेर तीन दिनमा आइपुगेको बताउँछन् (वाल्मिकी रामायण १.६८.१) । त्यस्तै दशरथ नाना थरीका रथ लिएर चार दिनको बाटोबाट मिथिला पुग्छन् (वाल्मिकी रामायण १.६९.७)।
२. लक्ष्मणले सीतालाई वाल्मीकि आश्रममा छोडेर त्यही दिन फर्किए । भारतको अयोध्याबाट नेपालमा रहेको वाल्मिकी आश्रम २५० किलोमिटरको दूरीमा भएकाले एकै दिनमा फर्किन सम्भव छैन ।
नेपालको चितवनमा मात्रै वाल्मीकि आश्रम रहेको मान्ने हो भने यो ठीकै होला । लवकुशले पिङ खेलेका भनेका लहरा, रामको घोडा बाँधेको खम्बा, पुराना इनार नभएका होइनन् । तर भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको बिठोरमा पनि वाल्मिकी आश्रम रहेछ । त्यही आश्रममा सीता र लवकुश बसेको र रामायण पनि त्यहीँ नै लेखिएको मान्यता रहेछ । वाल्मीकिको आश्रम हालको नेपालमा थियो कि भारतमा ? ऋषिमुनिहरू तप गर्दै धेरै ठाउँ पुग्थे । वाल्मीकिको आश्रम एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन । एक ठाउँमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । जसरी अचेल स्कूलका चेन हुन्छन्, गुरुकुल र आश्रमका पनि चेन हुन सक्छन् । हाल बिठोरमा रहेको आश्रममा लक्ष्मण सीतालाईले छाडेपछि हालको चितवनमा आएका पनि हुन सक्छन् । पछि उता गएका पनि हुनसक्छ ।
यी दुवै आश्रममा सीता र लवकुशको कुनै सम्बन्ध नहुन पनि सक्छ । वाल्मीकि ऋषि हुनु अघि डकैती गर्दै दिन बिताउँथे । नारदले वाल्मीकिलाई राम नाम जप्न सिकाउँदा वाल्मीकिलाई रामका बारेमा थाहा नभए जस्तो लाग्छ । त्यस्तै नारदले वाल्मीकि ऋषि भइसकेपछि रामायण सुनाउँदा वाल्मीकि भन्दा राम धेरै नै प्राचीन जस्ता लाग्छन् । सीतालाई वाल्मीकि आश्रममा छाडिएको प्रसङ्ग उत्तरकाण्डमा छ जसलाई वाल्मीकिले रचेको नभई पछि थपिएको मान्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ । वाल्मीकि रामायण डट नेटले उत्तरकाण्ड आफ्नो साइटमा राखेकै छैन ।
३. सन् २००० मा प्रकाशित कमलेश्वरको उपन्यास ‘कितने पाकिस्तान’ मा अयोध्या रामको जन्मभूमि नभएको पुष्टि गरिएको छ ।
यो त मेरी म्यागडालिन जिजस क्राइष्टकी पत्नी थिइन् भनेर ड्यान ब्राउनले डा भिन्ची कोड उपन्यासमा भनेजस्तो भयो । अमिश त्रिपाठीले उपन्यासमा लेखेकाले रावण, हनुमान, गणेश म्युटेन्ट हुन् भन्ने पुष्टि भइसक्यो भन्न पनि नमिल्ला ! हुन त प्राचीन ग्रन्थको आधारमा रामको इतिहास केलाउन खोजिँदै छ र केही ऐतिहासिकता भेटिएको पनि छ तर ग्रन्थ र उपन्यासका “तथ्य” र “कल्पना” छुट्याउन पनि त कम गाह्रो छैन ।
४. भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाए जस्तै बाबरी मस्जिदमाथि हिन्दूहरूले हमला गरून् भनेर त्यो ठाउँलाई अयोध्या भनिएको हुनसक्छ ।
बुद्धकालिन सम्पदाहरू नेपाल र भारत मात्रै होइन अफगानिस्तानसम्म पनि भेटिएका छन् । नेपालको लुम्बिनीमा भेटिएको अशोक स्तम्भले त्यहीँ बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने सिद्ध गरिसकेको छ । लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको पनि बीसौं वर्ष भइसक्यो । भारतले नक्कली लुम्बिनी बनाउन कसरी सक्ला ?
हाल अयोध्या भनिएको ठाउँ धेरै लामो इतिहासबाट गुज्रिएको छ । मुस्लिमहरूले यो क्षेत्रमा आक्रमण मात्र गरेनन्, शासन पनि गरे र कति ठाउँ तहसनहस पनि पारे । तेह्रौं शताब्दीमा सिमरौनगढ पतन भयो । त्यसै ताका कान्तिपुर र भादगाउँमा पनि लुट मच्चाए । बाबरी मस्जिद भएको ठाउँमा राम मन्दिर थियो भनेर हिन्दूहरूले मस्जिद गिराउनु उचित भने थिएन । तेह्रौँ शताब्दीका मुसलमान र बीसौँ शताब्दीका हिन्दू उस्तै हुन् ? होइनन् भने बाबरी मस्जिद ऐतिहासिक धरोहर थियो । साम्प्रदायिक दङ्गा नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । जति राम मन्दिर त्यति राम्रो भन्ने कुरा पनि सुनियो । त्यसो हो भने जति बुद्धका धाम त्यति राम्रो किन नभन्ने ?
५. नेपालको चितवन जिल्लामा रहेको माडी प्राचीन समयदेखि नै अयोध्यापुरीका नामले पनि जानिन्थ्यो । त्यसैले वास्तविक रामजन्म भूमि अयोध्या हुनुपर्छ । केही समय पहिलेसम्म त्यहाँस्थित एउटा गाविसको नाउँ अयोध्यापुरी रहेको थियो । अहिले टाँडी नगरपालिका भएपछि वडा ७ र ८ मा परेको छ । सो ठाउँबाट जनकपुर करिब १ सय ८० किमी पूर्वमा पर्छ भने वाल्मीकि आश्रम झण्डै ७० किमी पश्चिममा पर्छ । त्यहाँबाट रथमा चढेर एकै दिनमा वाल्मीकि आश्रम पुगेर फर्कन सकिन्छ ।
माडी (चितवन) कि ठोरी (पर्सा) ? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ ठोरी । पौडेल भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो लेख पढेर राम जन्मभूमि नेपालमा पर्छ भन्नुभयो ।” फेरि पौडेलको लेखमा माडी छ । अध्ययन नै नभएको कुरामा दाबी कसरी हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, कुनै कुरा दाबी गर्दा फ्याक्ट चेक गरौँ न है अनि यो लेख/किताबको आधारमा भनेको पनि भन्दिउँ न है । अस्ति मात्रै भारतीय मिडियालाई फ्याक्ट देखाएनन् भनेर गाली गरियो । हेर्नुस् त, भोलिपल्टै माफी माग्नुपर्यो । लाज भयो ।
६. “उता वाल्मीकि आश्रम अहिले पनि नेपालमै पर्छ । यो सबैले मानिआएको विषय हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको दक्षिणी सिमानामा अवस्थित यस आश्रममा नेपालकै भूमि भएर पुग्न सहज छैन । अहिले पनि त्रिवेणीबाट नारायणी पार गरेर इन्डियाको टंकी बजार पुगी इन्डियाकै वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र हुँदै सुननदी र पतनदी तरेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारको खासै ध्यान पुगेको छैन ।“
भारतमा पनि वाल्मीकि आश्रम रहेछ भन्ने त माथि लेखिसकियो । नेपालमा रहेको आश्रम सुगम हुनुपर्छ र संरक्षण गर्नैपर्छ ।
७. “रामायणको अन्तिमतिर वाल्मीकि, सीता र लव कुशलाई लिएर पैदल यात्रा गरी रामलाई भेट्न गएको वर्णन छ । वाल्मीकिले सीताको पवित्रताका बारेमा रामलाई अवगत गराएर सीता तथा लव कुश तीनै जनालाई रामको जिम्मा लगाउने योजना थियो । उनीहरूको भेट भएको ठाउँ अहिलेको देवघाट हो । त्यो वेला रामले सीतालाई स्वीकार गर्दा जनतामा गलत सन्देश जाने सोचेकाले सहजतासँग वाल्मीकिको आग्रह शिरोपर गर्न सकेनन् । यसबाट दुःखी भएकी सीताले धरती मातालाई पुकारिन् । धरती फाटिन् र सीता धरतीमा समाहित भइन् । त्यो ठाउँको दर्शन गर्न अहिले पनि देवघाटमा तीर्थालुहरूको भिड लाग्छ ।“
उत्तरकाण्डको यो पारिवारिक भेटघाट चितवनको देवघाटमा नै भएको ऐतिहासिक प्रमाण छ र ? उत्तरकाण्ड किन सन्देहपूर्ण छ भनेर त माथि आइसक्यो । फेरि नदोहोर्याऊँ । तर रामायणलाई इतिहास मान्ने हो भने धर्ती मातालाई पुकारेको अनि धर्ती फाटेको कुरा चाहिँ पत्यारिलो लाग्दैन ।
८. “अहिलेको अयोध्यापुरीदेखि पश्चिम नारायणी नदी पार गरेपछि रामग्राम आउँछ । अयोध्यापुरीदेखि उत्तरतिर रामपुर छ । अयोध्यापुरीदेखि पूर्व सुनसरी जिल्लाको जंगलमा रामले धुनी जगाई आगो तापेको ठाउँ अद्यापि रामधुनीका नामले प्रसिद्ध छ । उता देवघाटसँग जोडिएको रामनगर पनि बिर्सनु हुँदैन । पाल्पामा पनि रामपुर छ । रामपुरसँगै काली नदीको किनारमा रामघाट छ जहाँबाट राम अन्तध्र्यान भएका थिए । रामायणमा रामले आफ्नो राज्य विस्तार गरेको प्रसङ्ग उल्लिखित छ । वरिपरिका रामनाम युक्त ठाउँहरू रामले विजय प्राप्त गरेका ठाउँहरू हुन सक्छन् ।”
राम जन्मभूमि भनिसकेपछि त्यसको वरिपरी रामको नाम भएका ठाउँ हुनु स्वाभाविक नै होला । तर यो पनि अनुमानमै सीमित छ । अरू नै कुनै राम पनि त हुन सक्छन् नि ! रामायणका रामभन्दा अघिका परशुराम पनि राम नामले नै चिनिन्थे । वाल्मिकी रामायणमा परशुरामलाई पटकपटक भार्गव राम र जामदग्न्य राम भनिएको छ दुई रामका बीचमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर । विष्णुका दुई अवतारको नाम राम छ भने अरू कति राम होलान् ?
माथि वाल्मीकि रामायणका आधारमा मात्रै विश्लेषण गरेँ । अरू रामायणबाट कुरा आए भने मेरा तर्क पनि काटिएलान्, सीमित अध्ययन भएकाले वाल्मीकि रामायणले नै पनि काट्न सक्छ । ठूलो कुरा होइन । रामायण मात्रै ३०० वटा सम्म रहेका छन् । नारद, वाल्मिकी, कालिदास, तुलसीदास, काम्बन, भानुभक्त त मैले थाहा पाएका केही रचयिता हुन् । रामायणका पात्रहरूका अनेक कथा छन् । विभिन्न क्षेत्र र भाषाका लोककथाहरूमा राम कहिले सामान्य मानिस, कहिले राजा त कहिले भगवान् बनेका छन् । पाली भाषाको ‘दशरथ जातक’मा राम र सीता दाजुबहिनी हुन्छन् । कुनैमा रावणवध रामले नभएर लक्ष्मणले गर्छन् । काम्बन रामायणमा सीता रावणकी छोरी हुन्छिन् । पहाड, सागर र पुष्पक विमान बोलेको जस्ता दन्त्यकथा रामायणमा अटाएका छन् भने विश्वामित्रको तपस्या, शिवधनु, परशुराम, जस्ता पौराणिक कथा पनि आएका छन् । यस्ता कठिनाई बावजुद रामायणको ऐतिहासिकता खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् जुन निकै गाह्रो काम हो ।
असार १३, २०७७ मा भोगीराज चाम्लिङको ‘रामायणको लंका : श्रीलंका कि भारतमा ?’ शीर्षकको अन्वेषणमा आधारित एउटा लेख कान्तिपुरको कोसेलीमा छापिएको छ । लेखमा भाषिक अध्ययनका आधारमा लंकाको अर्थ टापू हुने, साथै भारतको मध्यप्रदेश स्थित क्षेत्रका आदिवासीका इतिहासका आधारमा उक्त क्षेत्रमा रामायणवर्णित लंका थियो भन्ने तर्कहरू सन्दर्भ सहित प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसभन्दा अघि २०७६ असोज २५ मा नयाँ पत्रिकाले ‘लंकाकोण’ शीर्षकमा सौरभको लेख प्रकाशन गरेको छ । यसमा पनि सन्दर्भहरू दिँदै विभिन्न भाषामा लंकाको अर्थ दक्षिण र टापू भनिएको छ र रामायणको लंका मध्यप्रदेशमा पर्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययन हुँदै जाँदा पुराना मान्यता फेरिएर नयाँ मान्यता स्थापित हुनु नौलो होइन । राम जन्मभूमिका विषयमा पनि उचित वैज्ञानिक अध्ययन भएर नयाँ कुरा आउनसक्छ तर अकस्मात नयाँ मान्यता आए भने तिनलाई आत्मसात् गर्न गाह्रो पनि हुन सक्छ । कोपर्निकस, ग्यालिलियो, डार्विनजस्ता वैज्ञानिकका प्रमाणित तथ्यलाई समेत जनमानसले सहजै ग्रहण गर्न सकेन ।
रामलाई कथाको पात्र मान्ने हो भने उनी जहाँ जन्मिएका भए पनि के फरक पर्छ र ? ऐतिहासिक पात्र हुन् भने पनि जुन बेला उनी जन्मिए, त्यो बेलाको भूगोल अहिलेको जस्तो छँदै थिएन । उनी न नेपाली थिए न भारतीय । उनलाई मान्नेले उनका कर्मका आधारमा भगवान् मानेका छन् । उनका गल्ती देखाएर उनलाई भगवान् नमान्ने पनि छन् । भगवान् मान्ने हो भने त उनी सर्वव्यापी छन् । न आदि छ न अन्त्य । न जन्म न मरण । बुद्धका हकमा पनि लगभग यस्तै कुरा लागू हुन्छन् । अनि यस्ता विषयमा झगडा किन गर्नुपर्यो ?
तर म बबुरोले मात्रै होला यस्तो सोच्ने ! राम जन्मभूमिका नाममा उठेको विवाद साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा परिणत भयो । त्यही द्वन्द्वबाट उठेर भारतीय जनता पार्टी राजनीति गरिरहेका छन् । भारतीय सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद भत्काएको ठाउँमा राम मन्दिर बनाउन पाउने निर्णयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राम्रै क्यास गरे । जुन रामको नाममा मोदी राजनीति गर्दैछन् तिनै रामको जन्मभूमिलाई फिक्का तर्कको आधारमा नेपालको भनेर दाबी नै गरिदिन्छन् ओली । कताकता डर लागिरहेको छ । भगवानका नाममा झगडा नगरौं भन्दा पनि कहिले बुद्ध त कहिले रामको विषयमा विवाद भइरहँदा रिचर्ड डकिन्सको ‘द गड डिल्युजन’मा पढेका (ठ्याक्कै यस्तै नभए पनि) शब्दहरू याद आइरहेको छ –“नरम भन्दा नरम धर्म (सम्प्रदाय) लाई मान्नेहरू पनि जुनसुकै बेला कट्टर हुन सक्छन् । त्यसैले सबै साम्प्रादाय हटाउनुपर्छ ।“
के हामी स्वतन्त्र छौ… on What’s the Point? (Part…
dancinglightofgrace on Shree Panchami
sandeept252 on Shree Panchami
Older Posts Select Month March 2022 (2) February 2022 (2) January 2022 (5) November 2021 (2) September 2021 (3) August 2021 (1) July 2021 (1) April 2021 (1) February 2021 (1) January 2021 (6) November 2020 (2) August 2020 (3) July 2020 (2) May 2020 (1) April 2020 (1) March 2020 (4) February 2020 (1) January 2020 (1) December 2019 (1) November 2019 (1) September 2019 (1) August 2019 (1) July 2019 (1) June 2019 (1) April 2019 (3) January 2019 (2) December 2018 (1) November 2018 (5) October 2018 (3) September 2018 (1) August 2018 (3) July 2018 (2) June 2018 (1) May 2018 (3) April 2018 (5) March 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (3) December 2017 (3) November 2017 (2) October 2017 (1) September 2017 (7) August 2017 (7) July 2017 (1) June 2017 (3) May 2017 (2) April 2017 (3) March 2017 (3) February 2017 (3) January 2017 (7) December 2016 (4) November 2016 (5) October 2016 (5) September 2016 (14) August 2016 (9) July 2016 (9) June 2016 (9) May 2016 (5) April 2016 (9) March 2016 (3) February 2016 (6) January 2016 (17) December 2015 (13) November 2015 (2) October 2015 (6) September 2015 (14) August 2015 (20) July 2015 (5) June 2015 (1) August 2014 (1) July 2014 (1) June 2014 (1) May 2014 (1)
Categories Select Category Awards (3) नेपाली (33) Blogging (168) Blogging 101 (4) Book Review (14) Children’s Day (1) climate change (1) Economy (3) essay (11) Evolution (5) Family (13) Game (2) Gaming (2) Genetics (2) Geology (7) Gratitude (8) Happiness (18) Health (2) History (6) Humanity (25) Humans and Humanity (77) humour (2) Insects (1) Inspirational (16) Life (11) Literature (5) Love (23) Monthly Feature (16) Movies (14) Music (4) Musings (3) Nature (9) Nepal (71) Nepali (70) Nepali Poem (16) Personal (2) Pet (1) Philosophical (13) Poetry (24) Politics (12) Public Health (2) Public Interest (15) Reasoning (14) Review (15) Satire (4) science (21) Science And Society (20) Similarities and Differences (2) Sports (2) Football (1) Story (24) technology (1) Tianjin Explosion (1) Travel (6) Uncategorized (27) Walk Free (1) Women (3) Words (12) Writing (29)